Law & More bụ onye njikwa banyere nhazi nke data nke gị. Law & More dị na De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Ọ bụrụ na ajụọ ajụjụ gbasara nkwupụta nzuzo a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị. Can nwere ike ịbịakwute anyị site na ekwentị na nọmba +31 (0) 40 369 06 80 na site na email na info@lawandmore.nl.
Iji tụọ azụmahịa nke weebụsaịtị anyị, anyị na-eji ọrụ Leadinfo na Rotterdam. Ọrụ a na-egosi anyị aha ụlọ ọrụ na adreesị ụlọ ọrụ dị na adreesị IP nke ndị ọbịa anyị. Agụnyere adreesị IP ahụ.
Younwere ike itinye arịrịọ maka nnweta, ndozi ma ọ bụ mmecha, nhichapụ, mgbochi, ikike data ma ọ bụ iwepu nkwenye enyere na Law & More site n'iziga email na adreesị ozi-e: info@lawandmore.nl. You ga-enweta azịza arịrịọ gị n’ime izu anọ. Enwere ike inwe ọnọdụ ebe Law & More enweghị ike (mezue) mejuputa arịrịọ gị. Dịka ọmụmaatụ nke a nwere ike bụrụ ikpe mgbe etinyeghị izu nzuzo nke ndị ọka iwu ma ọ bụ oge njigide iwu.